Bios | December 2019
Ampidiro ny ports USB amin'ny BIOS
Ny ports USB dia mety tsy mahomby raha toa ka very ny mpamily, ny fametrahana ny BIOS na ny connecteurs dia voadonan'ny fiara. Ny tranga faharoa dia matetika hita eo amin'ny tompon'ireo solosaina novidiana na novorina, ary koa ireo izay manapa-kevitra ny hametraka port hafa USB eo amin'ny solaitrabe na ireo izay mamerina ny safidin'ny BIOS.
Fantaro raha ampiasaina amin'ny solosaina ny BIOS na UEFI.
Nandritra ny fotoana maharitra, ny karazana rindrankajy mainty ampiasaina dia ny BIOS - B asic I nput / O utput S ystem. Miaraka amin'ny fampidirana ny dikan-teny vaovao amin'ny rafi-pihariana eo amin'ny tsena, ny mpikarakara dia miakatra tsikelikely mankany amin'ny fanavaozana vaovao - UEFI, izay misolo ny U eiversidable F irmware I nterface, izay manome safidy maro kokoa amin'ny fametrahana sy ny fandefasana ny birao.
Ampifanaraho amin'ny BIOS ny fametrahana Windows 7
Amin'ny antony iray hafa, ny olana amin'ny fametrahana Windows 7 dia mety hipoitra amin'ny modelim-panavaozana vaovao sy taloha. Ny ankamaroan'ny matetika dia noho ny tsy fetezan'ny BIOS tsy mety. Mampifanaraka ny BIOS eo ambany Windows 7 Nandritra ny fametrahana BIOS amin'ny fametrahana rafitra fiasa dia misy ny fahasarotana mitranga raha toa ka mety samy hafa ny dikan-teny.
Esory ny tenimiafina avy amin'ny BIOS
Ao amin'ny BIOS, afaka mametraka tenimiafina fiarovana amin'ny solosaina ianao, ohatra, raha toa ka tsy mila olon-kafa afaka miditra amin'ny OS amin'ny alàlan'ny rafitra fidirana fototra. Na izany aza, raha manadino ny tenimiafina BIOS ianao, dia tsy maintsy ilainao amin'ny famerenana azy indray, raha tsy izany dia tsy afaka miditra tanteraka amin'ny solosaina ianao.
Mametaka Bios hanomboka amin'ny flash drive
Good day. Raha vantany vao averimberina ny Windows, dia mila manitsy ny menu boot BIOS ianao. Raha tsy manao an'izany ianao, dia tsy ho hita ny USB flash flash drive na ny media hafa (izay tianao hapetraka OS). Amin'ity lahatsoratra ity dia tadiaviko ny antsipiriany hoe inona marina ny fametrahana BIOS amin'ny fandresena amin'ny lozam-pifaneraserana (lahatsoratra dia hifanakalaza ireo dikan-teny marobe amin'ny BIOS).
Safidy fidirana BIOS eo amin'ny ordinatera Lenovo
Ny mpampiasa dia mahalana dia mila miditra ao amin'ny BIOS, fa raha ohatra ka mila mampifanaraka Windows ianao na manamboatra fepetra manokana, dia tsy maintsy miditra ao ianao. Mety tsy mitovy amin'ny modely sy ny daty famoahana ity ordinatera amin'ny solosaina Lenovo ity. Maniditra ny BIOS amin'ny Lenovo Ao amin'ny solosaina finday vaovao avy amin'i Lenovo misy bokotra manokana izay ahafahanao manomboka ny BIOS rehefa miverina.
Ampidiro ny Virtualization BIOS
Mety ilaina ny fanatontosana ireo mpampiasa ireo izay miara-miasa amin'ny mpanamboatra sy / na ny milina virtoaly. Samy afaka miasa izy ireo raha tsy misy io safidy io, na izany aza, raha mila fahaiza-manao avo lenta ianao rehefa mampiasa ny emulator, dia mila mamela azy io ianao. Fampitandremana manan-danja Voalohany indrindra dia tsara ny manamarina fa manohana ny virtoaly ny solosainao.
Ahoana no hanaisotra ny boatin-ko fidiny ao amin'ny BIOS
Good day. Matetika, maro ireo mpampiasa no mametraka fanontaniana momba ny Safe Boat (ohatra, mila misafidy ny safidy indraindray rehefa manamboatra Windows). Raha toa tsy kilemaina izany, dia io fikarakarana fiarovana (novolavolain'i Microsoft tamin'ny 2012 ity) dia hijery sy hitady manokana. Fanalahidy izay tsy misy afa-tsy amin'ny Windows 8 (sy ambony).
Manavao BIOS amin'ny laptop HP izahay
Ny BIOS dia tsy nisy fiovana maro raha oharina tamin'ireo fiovana voalohany, fa ho an'ny fampiasana tsotra ny PC, indraindray dia ilaina ny manavao io singa fototra io. Ao amin'ny solosaina sy solosaina (anisan'izany ireo avy ao amin'ny HP) dia tsy manana fepetra manokana ny fizotry ny fanavaozana.
Ahoana no hiditra amin'ny Bios amin'ny ordinatera sy ny ordinatera. Fomba hidirana ao amin'ny Bios
Good afternoon Maro ireo mpisera vaovao no miatrika fanontaniana mitovy amin'izany. Ankoatr'izay, misy asa maro izay tsy voavaha mihitsy raha tsy miditra amin'ny Bios: - rehefa manamboatra Windows ianao dia mila manova ny laharam-pahamehana mba hahafahan'ilay PC manomboka amin'ny USB flash drive na CD; - hamerenao ny fanovana Bios ho tsara; - jereo raha efa misy ny karatra feo; - hanova ny ora sy ny daty, sns.
Atsaharo ny fiarovana azo antoka amin'ny BIOS
UEFI na Secure Boot dia fiarovana BIOS mahazatra izay mametra ny fahafahana mandefa ny fitaovana fanodinana USB ho toy ny boot disk. Ity fiarovana fiarovana ity dia azo jerena ao amin'ny ordinatera Windows 8 sy vao haingana. Ny maha-zava-dehibe azy dia ny misakana ny mpampiasa tsy handroba ny fametrahana ny Windows 7 sy ny ambany (na ny rafitra opera avy amin'ny fianakaviana hafa).
Inona no atao hoe Fitsipika amin'ny famerenana amin'ny BIOS
Ao amin'ny dikan-teny sasany amin'ny BIOS, ny iray amin'ireo safidy misy dia antsoina hoe: "Restore Standard". Ampifandraisina amin'ny famoahana ny BIOS amin'ny fanjakana tany am-piandohana izy io, saingy ho an'ireo mpampiasa tsy manana traikefa dia mitaky fanazavana momba ny fitsipika momba ny asany izany. Ny tanjon'ny safidy "Mandidy indray" amin'ny BIOS. Ny fahafaha-tenany, izay mitovy amin'ny iray amin'ireo fanontaniana, dia misy amin'ny BIOS tanteraka, na izany aza, manana anarana hafa izy mianakavy amin'ny dikan-teny sy ny mpanamboatra ny môtô.
Alefaso ny fomba AHCI amin'ny BIOS
AHCI no fomba fiasa mifanentana amin'ny fiara sy ny rindrambaiko maoderina miaraka amin'ny SATA connector. Amin'ny alalan'ity fomba ity, ny solosaina dia manatsara ny angona haingana. Matetika ny AHCI dia alefa any amin'ny solosaina maoderina, fa raha manamboatra OS na olana hafa, dia mety hijanona izany. Fampahalalana manan-danja Mba hampidirana ny fomba AHCI, dia mila mampiasa ny BIOS ihany ianao, fa ny rafitra fiasan-tenanao, ohatra, dia miditra amin'ny baiko manokana amin'ny alalan'ny "Command Line".
Inona no atao hoe D2D Recovery amin'ny BIOS
Ny mpampiasa laptop avy amin'ny mpamokatra samihafa dia afaka mahita ny safidy D2D Recovery ao amin'ny BIOS. Izy, araka ny hevitr'ilay anarana, dia natao hamerenana amin'ny laoniny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra izay mety hamerina ny D2D ianao, ny fomba fampiasana io endri-javatra io sy ny antony mety tsy ahafahany miasa. Ny lanjany sy ny endriky ny D2D Recovery Matetika, ny mpampiasa finday (matetika Acer) dia manampy ny parameter D2D Recovery amin'ny BIOS.
Manavao ny BIOS amin'ny rindrin'ny Gigabyte
Na dia eo aza ny fisian'ny interface sy ny BIOS dia tsy niova ny fiovana lehibe nanomboka tamin'ny famoahana voalohany (faha-80 taonany), amin'ny tranga sasany dia asaina manavao izany. Azo alaina amin'ny fomba samihafa ny dingana arakaraka ny reny. Ireo endri-javatra ara-teknika Ho an'ny fanavaozana marina dia tsy maintsy maka ny dikan-teny izay mifanaraka manokana amin'ny solosainao ianao.
Fampandehanana BIOS amin'ny laptop ASUS
Ny BIOS dia alahatra amin'ny alalana nomerika rehetra, fa ny solosaina na ny ordinateran'ny solosaina. Ny dikan-teny dia mety miankina amin'ny mpamorona sy ny modely / mpanamboatra ny môtô, ka ny rindrambaiko tsirairay dia mila maka sy mametraka vaovao avy amina mpandrindra iray ihany ary misy dika manokana.
Fampandehanana BIOS amin'ny solosaina Lenovo
BIOS dia programa voatahiry ao an-tsain'ny reny. Izy ireo dia manompo amin'ny fifandraisana marina amin'ny fitaovana rehetra sy ny fitaovana mifandray. Avy amin'ny dikan-teny BIOS dia miankina amin'ny fomba hiasan'ny fitaovana. Matetika, ny mpamorona môtô dia mamoaka ny fanavaozana, manitsy ny olana na manampy ny fanavaozana.
Famotehana ny ACPI_BIOS_ERROR
Iray amin'ny fahadisoana mampalahelo indrindra eo amin'ny solosaina misy rafitra fiara Windows dia ny BSOD miaraka amin'ny lahatsoratra "ACPI_BIOS_ERROR". Ankehitriny dia te hampahafantatra anao amin'ny safidy hanafoanana ity tsy fahombiazana ity izahay. Fanitsiana ACPI_BIOS_ERROR Ity olana ity dia miseho noho ny antony marobe, manomboka amin'ny tsy fahombiazan'ny rindrambaiko toy ny olana momba ny mpamily na ny tsy fahombiazan'ny rafitra fiasa amin'ny tsy fahombiazan'ny rindrambaiko na ny rafitra.
Ahoana no fomba hanatsarana ny rindrina Bios?
Rehefa mamadika ny ordinatera ianao, i Bios, micro microprogramme iray voatahiry ao amin'ny ROM's motherboard, dia mandefa ny fifehezana azy. Ao amin'ny Bios dia mametraka fikarakarana maro ho an'ny fanamarinana sy famaritana ny fitaovana, ny fifehezana ny OS loader. Amin'ny Bios, afaka manova ny daty sy ny fotoana ianao, mametraka tenimiafina maimaim-poana, mamaritra ny laharam-pahamehana eo amin'ny fametrahana fitaovana, sns.
Famoronana sarimiaina mafy amin'ny BIOS
Raha ny ordinateran'ny solosaina manokana, dia azo atao ny manamboatra fizarazarana raki-drakitra tsy misy fiatoana. Ohatra, ny fisian'ny fahadisoana lehibe sy ny fahadisoana hafa ao amin'ny OS. Ny safidy tokana azo atao amin'ity tranga ity dia ny famolavolana ny fiara mafy amin'ny BIOS.
https://termotools.com mg.termotools.com © Bios 2019